San Htun's Diary: ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၂၃
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၂၃
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာပို့ စ်တွေ မရေးဖြစ်တာတောင် အတော်ကြာပြီ။ ကျောင်းမှာတုန်းကတော့ အင်တာနေရှင်နယ် ကျောင်းသားဆီက သိရသမျှ သူတို့ နုိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံတွေအကြောင်း၊ ကျောင်းသားတွေ ဗရုတ်ကျကြတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ စီးရီးပို့ စ်တွေ ရေးဖြစ်တယ်။ ကျောင်းပြီးတော့ ရေးစရာအကြောင်းလည်း မရှိတော့တာနဲ့မရေးဖြစ်တော့တာ သုံးနှစ်လောက်တောင် ရှိတော့မယ် ခုမှပဲ ရေးဖြစ်တော့တယ် ဆိုပါတော့။ ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာမှာ နယူးယောက်ကို ပြောင်းလာတော့ သူငယ်ချင်းမရှိ၊ နယူးယောက်ဆောင်းတွင်းကလည်း တအားအေးတော့ ဘယ်မှမထွက်ဖြစ်ဘူး။ နွေလည်းပေါက်ရော meet up အဖွဲ့ တွေနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း ဗီယက်နမ်မလေးဝိုင်းနဲ့အသိမိတ်ဆွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဝိုင်းက နယူးယောက်ကိုရောက်တာ မကြာသေးဘူး ၃လလောက်ပဲ ရှိတယ်။ အရင်က အီတလီက ယူအန်မှာ ၇ နှစ်လုပ်ခဲ့တာ။ နောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်လာပြန်တော့ ဗီယက်နမ်အကြောင်းကို ပိုသိလာတယ်။ ယူအက်စ်ကျောင်းမှာတုန်းက ညီအစ်မလိုခင်ကြတဲ့ မိုင်းဖန်၊ စီနီယာ ငါး၊ တတန်းတည်းသား ဟွားလဲ့တို့ ကြောင့် ဗီယက်နမ်ဆိုတာ အစိမ်းသက်သက်တော့ မဖြစ်နေခဲ့ပါဘူး။ ဗီယက်နမ်တွေဟာ အင်္ဂလိပ်စာအသံထွက် အတော်ဆိုးတယ်။ အစတုန်းက မိုင်းဖန်ပြောတာ ဘယ်သူမှ နားမလည်ကြဘူး။ ကိုယ်က စင်္ကာပူမှာ တရုတ်၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အိန္ဒိယတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ရသူဆိုတော့ မိုင်းဖန်ပြောတာကို နားနားနားလည်တယ်။ မိုင်းဖန်က အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကို ကိုယ်ကနားထောင်၊ ပြီးရင် ဆူနမ်တို့ ကို အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြော English to English translate လုပ်ခဲ့ရတယ်။ နောက်ရင်းနှီးလာတော့ မိုင်းဖန် ဘာကိုဆိုလိုချင်မှန်းသိလာတော့ ဘာသာပြန်စရာ မလိုတော့ဘူး။
မိုင်းဖန်က ဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်း ဟနွိုင်းက၊ ခန္ဓာကိုယ်က ကိုယ့်တခြမ်းလောက်ပဲ ရှိတယ်။ စားတာကတော့ ကိုယ့်ထက်နှစ်ဆ စားနိုင်တယ်။ သူ့ ခြေထောက်က chopstick နဲ့chopstick လို့နာမည်ပေးထားတယ် ရာသီဥတုအေးရင် သွေးအားနည်းပြီး ချောင်းတဟွတ်ဟွတ် ဆိုးနေတတ်တယ်။ အဘိုးအဘွားတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပေမဲ့ သူတို့ လက်ထက်ကျတော့ ကွန်မြူနစ်စနစ်ကြောင့် ဘာသာမဲ့ဖြစ်နေပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုတွေက ရှိနေသေးတယ်။ မိုင်းဖန်က စာတော်တဲ့ အေကျောင်းသား။ သူမသိတာ ဘာမှမရှိဘူး မာစတာဘရိန်းဆိုပါတော့။ ဗီယက်နမ်မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး မလေးရှားက HP မှာ အလုပ်လုပ်တယ်။ တော်တော့ ကယ်လီဖိုးနီးယားက ကုမ္ဗဏီကို ပို့ တယ်။ ၂၀၀၈ စီးပွားပျက်ကပ်ဖြစ်တော့ ဗီယက်နမ်ကို ပြန်ပို့ ခံရတယ်။ ဒီတော့ မိုင်းဖန်က လေးအော့ဖ်ထိမှာ အရမ်းကြောက်တယ်။ မိုင်းဖန်က စိတ်ရင်းကောင်းတယ် ကူညီတတ်တယ် အဲ သူ မကြိုက်ရင်တော့ လှည့်တောင်မကြည့်ဘူး။ အလာဘသလာဘ စကားလည်း မပြောတော့ဘူး သူပေးမယ်ဆို ပေးရမှ ဘူးဆိုဖရုံမသီးတဲ့ လူစားမျိုး။ ကိုယ်ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ရှာတဲ့အချိန် မိုင်းဖန်က အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ် စင်စင်နာတီမြို့ မှာ အလုပ်ရနေပြီ။ သူ့ ဆီမှာ လာနေပြီး အလုပ်ရှာဖို့ဘတ်စ်ကားလက်မှတ် ဝယ်ပို့ ပေး၊ သူ့ အိမ်မှာနေတဲ့ တလအတွင်း နေထိုင်စားသောက်စရိတ်ကို သူက အကုန်အကျခံ၊ ကန်တက်ကီပြည်နယ်ကို အင်တာဗျူးဖို့ သွားတော့ ကိုယ့်ကို ငွေတွေထုတ်ပေး၊ အလုပ်ရတော့လည်း ကိုယ်တောင် ဘာမှမပြောရဘူး ပို်က်ဆံတထောင်ချေးတယ်။ ဆူနမ့်ကိုလည်း သူ့ ကုမ္ဗဏီမှာ အလုပ်သွင်းပေး၊ သူ့ အိမ်မှာနေခိုင်း၊ သူ့ ကားစီးပြီး သူနဲ့ အတူရုံးတက်၊ ပရိုဂရမ်းမင်း မကျွှမ်းတဲ့ ဆူနမ့်ကို သင်ပြပေးတယ်။ မိုင်းဖန်ဟာ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်။ ကိုယ်တောင် သူ့ လောက် ကောင်းနိုင်ပါ့မလားလို့တခါတလေ တွေးမိတယ်။
စီနီယားငါး Nga က ကလေးနှစ်ယောက်အမေ မိုင်းဖန် ပိန်တာထက်ကို ထက်ဝက်ပိန်တယ်။ စာမေးပွဲမှာ အမှတ်နည်းလို့စိတ်ညစ်တယ် လမ်းလျှောက်ထွက်ရအောင်ဆိုပြီး ကုိုယ့်ကို လာခေါ်တတ်တယ်။ တတန်းတည်းသား နီပေါမလေး ပူရီမာကို စာသင်ပေးတယ်၊ ပူရီမာက စိတ်ထားမကောင်းဘူး။ နောက်တော့ ပြသနာဖြစ်တယ်လို့ကြားတယ် ပူရီမာ လွန်တာနေမှာပါ။ ခုတော့လည်း အနောက်ဖက်ခြမ်းက ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာနေတဲ့ ငါးနဲ့အရှေ့ ဖက်ခြမ်း မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ဘော့စတွန်မှာနေတဲ့ ပူရီမာတို့ဖလောရီဒါကို ခရီးအတူတူ ထွက်ကြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ ဖေ့ဘွတ်မှာ တွေ့ လိုက်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့လည်း ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက် နေမှာပေါ့။ မိုင်းဖန်၊ ငါး ဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်းသူတွေဟာ အစားအသောက် အင်မတန် သောင်းကျန်းကြတယ်။ သူတို့ ဗီယက်နမ်မှာ ခွေးလေခွေးလွင့် မရှိဘူးတဲ့ ဗိုက်ထဲကို အကုန်ရောက်ကုန်ကြတာကိုး။ ကိုယ်တို့ ကွန်ပျူတာမာစာတာမှာ ကျောင်းသားက ၄၀ ဆို ကျောင်းသူက ၅ ယောက်လောက်ပဲ ပါတယ်။ ဒီတော့ စီနီယာ၊ ဂျူနီယာကျောင်းသူတွေဟာ အချင်းချင်း ကူညီရိုင်းပင်းကြတယ်။ Ladies Night ဆိုပြီး ကျောင်းက စီနီယာ၊ ဂျူနီယာကျောင်းသူတွေ ပရော်ဖက်ဆာအိမ်မှာ ပါတီပေးတော့ ဒီကျောင်းကို ဘယ်လိုတွေ့ တယ်၊ ဘာတွေကြိုက်တယ်ဆိုတာ ပြောကြတော့ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသူက သူ့ ခွေးဓာတ်ပုံကို ပြတယ်။ အားလုံးက so cute ချစ်စရာလေးပေါ့ မိုင်းဖန်နဲ့ငါး ဗီယက်နမ်သူနှစ်ယောက်က Yummy....yummy လို့တွေးနေပါသတဲ့။ ကောင်းကင်မှာ ပျံနေတဲ့ အွတ်..အွတ်လို့မြည်တဲ့ အမည်းရောင်ငှက် (ဘာငှက်မှန်းလည်း သူတို့ လည်း နာမည်မသိကြ) ကို ပစ်ပြီး သွေးကို သောက်ပါသတဲ့ အောင်မလေး ။ ငါးက တောင်ကိုရီးယားမှာ ၄ နှစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့တာ ကိုရီးယားလို တစ်လုံးမှ မပြောတတ်ဘူးတဲ့။ ဗီယက်နမ်လေး ဟွားလဲ့လည်း တောင်ကိုရီးယားမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တာ ကိုရီးယားမတွေ ဆိုဂျူးသောက်ပြီး လမ်းမမှာ ပစ်လဲနေတာ မြင်မကောင်းဘူးတဲ့။
One World Trade Center which took 14 years to build after 911.
ဟွားလဲ့နဲ့မိုင်းဖန်ဟာ ကုမ္ဗဏီတစ်ခုတည်းမှာ အတူတူလုပ်ခဲ့တာတဲ့။ ယူအက်စ်ကို ကျောင်းတက်ဖို့လာကြတော့ အိုင်အိုဝါပြည်နယ် စီဒါးရက်ပစ်လေဆိပ်မှာ ကျောင်းကတာဝန်ခံကို စောင့်နေကြတုန်း မိုင်းဖန်လို့ဗီယက်နမ်လို ပီပီသသ နှုတ်ဆက်သံကို ကြားရလိုက်တော့ မိုင်းဖန်ခမျာ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ နောက်တော့မှ ဟွားဖြစ်နေမှန်း သိလိုက်ရတယ် ရေစက်တွေများနော် နောက် ၇ နှစ်အကြာ ယူအက်စ်ကျောင်းမှာ ပြန်တွေ့ ကြလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူက တွေးမိမလဲ။ ဟွားဆိုတာ ပန်းလို့အဓိပ္ဗာယ်ရပြီး မိန်းကလေးကို ပေးတဲ့နာမည်။ ဘာဖြစ်လို့သူ့ မိဘတွေက ယောက်ျားလေးကို မိန်းကလေးနာမည် ပေးထားလည်း မသိဘူးတဲ့။ ဟွားကို မေးမယ် မေးမယ်နဲ့ကျောင်းသာပြီးသွားရော မမေးလိုက်မိဘူး။ ဟွားက အေးတိအေးစက် မထုံတက်သေး အပေါင်းအသင်းနည်းတယ် ကျောင်းပြီးတော့ ဗီယက်နမ် ပြန်သွားတယ်။ မိုင်းက ဟွားလဲ့နဲ့သိပ်မတွဲဘူး သူ့ ရည်းစား အထင်လွဲမှာစိုးလို့ တဲ့။ ဗီယက်နမ်တွေဟာ မြန်မာနဲ့ အတော်တူတယ်။ ခု သိရတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ ဝိုင်းဆီက သိရတာပါ။ ဝိုင်းက ဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်း ဟနွိုင်းက။ ဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ တောင်ပိုင်း လေသံကွဲတယ်။ သူ စကားပြောလိုက်တာနဲ့မြောက်ပိုင်းကမှန်း သိတယ်တဲ့။ ယူအက်စ်ကို ရောက်နေတဲ့ ဗီယက်နမ်တွေကတော့ တောင်ပိုင်းက များတယ်တဲ့။ ဗီယက်နမ်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တော့ မြောက်ပိုင်းက စစ်နိုင်တယ်။ စစ်ရှုံးတဲ့ တောင်ပိုင်းသားတွေဟာ မဟာမိတ် ယူအက်စ်ကို လှေတွေနဲ့အသက်လုပြေးရတော့ မြောက်ပိုင်းသားတွေကို မကျေနပ်ဘူး။ ဒင်းတို့ ကြောင့် ငါတို့ တိုင်းပြည်ကို အသက်စွန့် ပြေးရတာဆိုပြီး။ ဗီယက်နမ်စကားမှာ မြောက်ပိုင်းလေသံက နားထောင်ကောင်းတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ ဗီယက်နမ်စကား သင်မယ်ဆိုရင် မြောက်ပိုင်းလေသံကို သင်ကြတယ်တဲ့။ သူတို့ ဗီယက်နမ်အချင်းချင်းတောင် အလယ်ပိုင်းလေသံကို အတော်နားဝင်ဆိုးတဲ့လေသံလို့မှတ်ယူပါသတဲ့။
ဗီယက်နမ်ဟာ တရုတ်လက်အောက်ကို နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ နီးပါး ကျရောက်ခဲ့တော့ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွေ သက်ဝင်နေတယ်။ ဗီယက်နမ်နှစ်သစ်ကူးချိန်ဟာ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးချိန်နဲ့အတူတူပဲ။ နှစ်သစ်ကူးချိန်မှည tangerines လို့ ခေါ်တဲ့ လိမ္မော်သီးပင်လေးတွေကို အိမ်တွေမှာ အလှဆင်တတ်တယ်။ အခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာ ဆွေမျိုးတွေအိမ် သွားလည်တာ၊ မိသားစု၊ အမျိုးတွေစုပြီး စားသောက်ကြတာကတော့ အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများ တူကြတယ်။ ဗီယက်နမ်တွေက တရုတ်အစိုးရကို မုန်းကြတယ်။ ဗီယက်နမ်မှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း တော်တော်များများမှာ တရုတ်ကုမ္ဗဏီတွေ လုပ်နေကြတာ။ တရုတ်ဆန့် ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်လာပြီး ဟနွိုင်းမှာ တရုတ်စက်ရုံတွေ တော်တော်များများ ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ သတင်းမှာ တွေ့ လိုက်တော့ မိုင်းဖန်ကို ဟနွိုင်းက သူ့ မိသားစုတွေ ဘေးကင်းရဲ့ လားလို့မေးမြန်းတယ်။ မိုင်းဖန်က တရုတ်တွေ တော်တော်ဆိုးတယ် သူတို့ နိုင်ငံကို အနုနည်းနဲ့သိမ်းပိုက်နေတာ။ ခုလည်း ဗီယက်နမ်ပိုင်တဲ့ကျွှန်းကို တရုတ်နဲ့သူပိုင်ငါပိုင် အငြင်းပွားနေလို့စစ်တောင် ဖြစ်မလားမသိတဲ့။ ဝိုင်းကို မေးကြည့်တော့ ဟုတ်တယ် သူတို့တရုတ်အစိုးရကို သိပ်မုန်းတာတဲ့။ အီတလီမှာတုန်းက တရုတ်သံရုံးရှေ့ မှာ ဆန္ဒပြတော့ ဖိလစ်ပိုင်တွေလည်း ပါတယ်တဲ့။ ကြည့်ရတာ ဖိလစ်ပိုင်တွေလည်း တရုတ်နဲ့အချင်းများနေတာ ဖြစ်ရမယ်။ ဗီယက်နမ်ပို့ ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်းကြီးက တရုတ်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ဗဏီတွေ အရည်အသွေး မပြည့်မမှီတည်ဆောက်လို့ဗီယက်နမ်လူမျိုးတွေ သေဆုံးရတယ်လို့ဝေဖန်တယ်လို့သတင်းမှာ တွေ့ လိုက်တယ်။ ကိုယ်တို့ မြန်မာတွေလည်း ဖေ့ဘွတ်မှာ အဲဒီသတင်းရှယ်ကြပြီး တို့ မြန်မာဝန်ကြီးတွေလည်း အဲဒီဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးလို ပြောရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ပြောကြတယ်။ ဗီယက်နမ်အစိုးရက တရုတ်အစိုးရကို မပြောရဲဘူး အရေးပေးတယ် အဲဒါကို ဗီယက်နမ်ပြည်သူတွေက မကျေနပ်တာ။
ရုံးက ဆူပါဗိုက်ဆာတရုတ်မက ယူနန်ပြည်နယ်က ယူနန်ပြည်နယ်က မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်တွေနဲ့နယ်နမိတ်ချင်း ထိဆက်နေတယ်။ မင်းတို့ မြန်မာလေတပ်က ဗုံးဝင်ကြဲလို့တရုတ် ၉ ယောက် သေသွားတယ်လို့သတင်းမှာ တွေ့ လိုက်တယ်။ ကိုယ်နဲ့ လည်း မဆီမဆိုင်ဘဲ ဆောရီးလို့တောင်းပန်လိုက်ရတယ်။ မဆောရီးပါနဲ့မင်းလုပ်တာမှ မဟုတ်ဘဲ မင်းတို့ အစိုးရလုပ်တာလေ။ ကိုးကန့် အကြောင်း ကိုယ်သိသလောက် ရှင်းပြလိုက်ရတယ်။ မင်းတို့ တရုတ်အစိုးရ သိပ်ဆိုးတယ် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံမှာ ရေကာတာ လာဆောက်တယ်။ ဟား...ဟား... ကိုယ်တို့ တွေက ရေကာတာဆောက်တာ သိပ်တော်တာ။ ဒါပေမဲ့ မြစ်ဆုံမှာ မဆောက်သင့်ဘူးလေ တော်ပြီ ရုံးမှာ နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးတွေ မဆွေးနွေးတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ဗီယက်နမ်တွေ တရုတ်မုန်းတဲ့အကြောင်း ပြောပြတော့ ၁၉၇၀ လောက်တုန်းက ဗီယက်နမ်နဲ့ တရုတ် စစ်ဖြစ်တယ်တဲ့။ တရုတ်တွေ ဆောက်ထားတဲ့ စက်မှုဇုန်က စက်ရုံတွေကို သူပိုင်ငါပိုင် အငြင်းပွားရင်းနဲ့စစ်ဖြစ်တာတဲ့။ တရုတ်စစ်တပ်က ဗီယက်နမ်ပိုင်နက်မှာရှိတဲ့ တရုတ်ပိုင်စက်ရုံတွေကို ဝင်ဖျက်ဆီးပစ်တယ်။ ထူးဆန်းတာက နှစ်နိုင်ငံစလုံးက စစ်နိုင်တယ်လို့ကြေငြာတာတဲ့။ တရုတ်ကလည်း ဗီယက်နမ်တွေကို အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ တရုတ်ပိုင်စက်ရုံတွေကို ဗီယက်နမ်မြေပေါ်ကနေ အောင်မြင်စွာ ဖျက်ဆီးလိုက်နိုင်လို့တရုတ်က စစ်နိုင်တယ်တဲ့။ ဗီယက်နမ်ကလည်း ဗီယက်နမ်မြေပေါ်ကနေ တရုတ်တွေကို အောင်မြင်စွာ တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့လို့ဗီယက်နမ် စစ်နိုင်တယ်တဲ့။ ဗီယက်နမ်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တော့ မြောက်ပိုင်းက ကွန်မြူနစ်၊ တောင်ပိုင်းက ဒီမိုကရေစီ မြောက်ပိုင်းကို ရုရှားက ထောက်ခံပြီး တောင်ပိုင်းကို အမေရိကန်က ထောက်ခံတယ်။
Lower Mahattan skyline view from Exchange Place, New Jersey.
Our office will move to Exchange Place in coming June. Afternoon walk after lunch looking at this skyline will be awesome.
တောင်ပိုင်းက စစ်ရှုံးတော့ မဟာမိတ်ယူအက်စ်ကို လှေတွေနဲ့အသက်လုပြေးရတော့ တောင်ပိုင်းသားတွေက မြောက်ပိုင်းသားတွေကို မုန်းတယ် ဒင်းတို့ ကြောင့် ငါတို့ တိုင်းပြည်ကို စွန့် ပြေးခဲ့ရတာဆိုပြီးတော့။ ခုဆိုရင် အမေရိကန်မှာ ဗီယက်နမ် ၁ သန်းလာက် ရှိတယ်။ အမေရိကန်မှာ ကြီးပြင်းတဲ့ ဗီယက်နမ်တွေဟာ ဗီယက်နမ်စကား မပြောတတ်တော့ဘူး။ အမေရိကန်နိုင်ငံကို မိခင်နိုင်ငံလို့ခံယူကြပြီး သူတို့ ကိုယ်သူတို့အမေရိကန်မှာမွေးဖွားတဲ့ ဗီယက်နမ်တွေလို့ပြောလေ့ရှိတယ်။ ခုတော့ တောင်နဲ့ မြောက် ပေါင်းစည်းလို့ဗီယက်နမ်တနိုင်ငံတည်း ဖြစ်နေပေမဲ့ မြောက်ပိုင်းသားတွေ အုပ်ချုပ်နေတာကို မကျေနပ်နိုင်တဲ့ အမေရိကန်ရောက် တောင်ပိုင်းသားတွေက ပြည်တွင်းစစ်တုန်းက သုံးခဲ့တဲ့ တောင်ဗီယက်နမ်အလံကိုကိုင်ပြီး ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဆိုပြီး ဆန္ဒပြလေ့ရှိပါသတဲ့။ မြောက်ပိုင်းသူ ဝိုင်းကတော့ ကွန်မြူနစ်စနစ်မှာ ကောင်းတာတွေလည်း ရှိတယ် အကုန်လုံး perfect ဖြစ်တဲ့ အစိုးရဆိုတာ မရှိဘူးလို့ယူဆတယ်။ မြောက်ပိုင်းသူဆိုတော့ တောင်ပိုင်းသားတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကို ဘယ်နားလည်ပါ့မလဲလေ။ ရုံးက ဓာတ်လှေကားမှာ ဆုံကြတော့ ဗီယက်နမ်လို့သိကြတာနဲ့အသိမိတ်ဆွေ ဖွဲ့ ကြ ဖုန်းနံပါတ်တွေလဲ နေ့ လည်စာ အတူစားရအောင်လို့ဖိတ်သတဲ့။ ဝိုင်းက အင်တာနက်မှာ အဲဒီကောင်မလေးနာမည် ရိုက်ထည့်လိုက်တော့ လား..လား... တောင်ပိုင်းက နာမည်ကြီး ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုဆန္ဒပြတဲ့သူ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီကောင်မလေးက နေ့ လည်စာစားဖို့ဖုန်းခေါ်ရင် ဝိုင်းက ဖုန်းမကိုင်တော့ဘူး။ ငါ သူနဲ့စားသောက်နေတဲ့ပုံတွေ သတင်းထဲ ပါသွားလို့ ကတော့ ဗီယက်နမ်ကို အလည်ပြန်လို့ရပါတော့မလားမသိဘူးတဲ့။ အင်း သူတို့ ဗီယက်နမ်လည်း ကို်ယ်တို့ ရွှေပြည်ကြီးနဲ့ထူးမခြားနားပါလား။
ဗီယက်နမ်က ကိုယ်တို့ ရွှေပြည်ကြီးထက် သာပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ လျှပ်စစ်မီး မှန်တယ်၊ သန့် ရှင်းတဲ့ရေ ရတယ်၊ အင်တာနက်ကောင်းတယ်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းတယ်၊ ကျန်းမာရေးအာမခံရှိတယ်။ ဝိုင်းအဖေလည်း ကိုယ့်အဖေလို နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းလို့နှလုံးထဲ ပိုက်ထည့်ရတာ ကျန်းမာရေးအာမခံက အကုန်ခံပေးသွားတယ်။ သူတို့ က ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၁ ထောင်လောက်ပဲ ပေးရတယ်တဲ့။ ကိုယ်တို့ ရွှေပြည်ကြီးမှာတော့ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ကတော့ သေပြီဆရာ။ ဗီယက်နမ်မှာ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေလောက်ပဲ ကျန်းမာရေးအာမခံ ရှိတာတဲ့။ သာမာန်လယ်သမားတွေကတော့ ဘာအာမခံချက်မှ မရှိဘူး။ ဗီယက်နမ်တွေဟာ အလုပ်အရမ်းလုပ်ရတယ် ဒါတောင် နေ့ စဉ်ထမင်းနပ်မှန်အောင် စားလောက်ရုံပဲ။ ခရီးသွားဖို့၊ အဝတ်အစားအသစ်ဝတ်ဖို့ ၊ အပိုသုံးဖို့ ဆိုတာ မစဉ်းစားရဲပါဘူးတဲ့။ ဝိုင်းအဖေဖက်က အဘိုးက ပထမဇနီးနဲ့ကလေး ၅ ယောက်၊ ပထမဇနီးဆုံးသွားတော့ ဒုတိယဇနီးနဲ့ကလေး ၅ ယောက်။ ဝိုင်းအဖေမှာ မောင်နှမသားချင်း ၉ ယောက် ရှိတယ်။ ဒီနေ့ ခေတ် ဗီယက်နမ်တွေကတော့ ကလေး ၂ ယောက်ပဲ မွေးကြတယ်တဲ့။ ကလေးစရိတ်က ကြီးတာကိုး။ အမေရိကန်တွေလည်း ကလေး ၂ ယောက်ပဲ မွေးကြတော့တယ်။ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတုန်းက ဝိုင်းဦးလေးတစ်ယောက်က အသက် ၁၆ နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အသက်မပြည့်သေးပေမဲ့ စစ်တပ်ထဲ ဝင်ချင်လွန်းတော့ အသက်လိမ်ပြီး ဝင်တယ်။ တိုက်ပွဲမှာ ကျသွားမှန်း သိပေမဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ကျသွားမှန်းမသိ။ နှစ်ပေါင်း ၃၀ အကြာမှာ လေချွှန်နတ်အကူအညီနဲ့သေဆုံးတဲ့နေရာကို မေးကြည့်ပြီး သွားကြည့်တော့ တကယ်တွေ့ တယ်။ သေတဲ့နေရာက တကယ့်တောခေါင်ခေါင် သွားရလာရ အလွန်ခက်တဲ့နေရာ။
နောက်တော့ အမိန့် ပြန်တမ်းတွေဖတ်၊ ပြာအိုးကို အိမ်ကို သယ်လာခဲ့တယ်တဲ့။ မြန်မာနဲ့ အတော်တူလိုက်တာနော်။ ကွန်မြူနစ် ဘာသာမဲ့ပေမဲ့ ရှေးဘဝ၊ နောက်ဘဝ ယုံတယ်။ သိပ္ဗံနည်းနဲ့မရှင်းပြနိုင်တဲ့၊ ကို်ယ်တို့ ဦးနှောက်နဲ့ လိုက်မမှီနိုင်တဲ့ လောကကြီးမှာ ဆန်းကျယ်တာတွေလည်း ရှိသေးပါလားလို့လက်ခံတယ်။ တောင်ဗီယက်နမ်သမ္မတတောင်းဆိုလို့အမေရိကန်လေတပ်အကူအညီနဲ့ Agent Orange တွေ ဖျန်းခဲ့ပါတယ်တဲ့။ အမေရိကန်ကွန်ဂရက်မှာ အငြင်းပွားကြပေမဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ ခွင့်ပြုချက် ရခဲ့ပါတယ်။ အေးဂျင့်လိမ္မော်ရောင်ဟာ အပင်တွေ ဖျက်ဆီးတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးပါ။ ဗြိတိသျှတွေ အရင်သုံးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီအေးဂျင့်လိမ္မော်ရောင် ဖြန်းပက်ခံရတဲ့ဒေသတွေမှာ ခေါင်းကြီး၊ ကို်ယ်သေး၊ မျက်စိပြူးတဲ့ ကလေးတွေ မွေးဖွားလာပါတယ်။ ဒီမျိုးဆက်တဆက်မှာ မပေါ်ပေမဲ့ နောင်မျိုးဆက်မှာ ပြန်ပေါ်လာရော အခါခါ ပြန်သတ်နေသလိုပါပဲတဲ့။ အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ ဂူဂယ်မှာ အေးဂျင့်လိမ္မော်ရောင်လို့ရိုက်ထည့်ပြီး ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ကလိုင်းရင့်ရုံး The Port Authority of New York & New Jersey က မန်နေဂျာမက အိန္ဒိယသူ ဒီဒီကားတဲ့။ သူက အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်း ပန်ဂျပ်နယ်က ပန်ချာပီ ခေါင်းပေါင်းတဲ့လူမျိုး။ ဆူနမ်တို့ဂူရုန်းမျိုးနွယ်တွေရဲ့ယောက်ျား၊ မိန်းမနာမည်အားလုံးမှာ ဂူရုန်းပါတော့ နာမည်နဲ့ တင် ဂူရုန်းမျိုးနွယ်မှန်း သိသာတယ်။ ဒီဒီတို့့ ပန်ချာပီတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့middle name ၊ last name မှာ ကား kaur ဆိုတာ ပါတယ်တဲ့။ အမျိုးသားတွေကတော့ ဆင်း singh ပါတယ်။ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း စီးပွားရေးပညာရှင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ကင်းရှင်းလို့Mr.Simple လို့နာမည်ရထားတဲ့ မန်မိုဟန်းဆင်ဆိုတာ ဒီဒီတို့ပန်ချာပီမျိုးနွယ်ပေါ့။ ပန်ချာပီတွေဟာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအားလုံး မွေးကတည်းက ဆံပင်ကို မဖြတ်ကြဘူးတဲ့။ ပန်ချာပီတွေရဲ့မြင့်မြတ်အရိုအသေပြုတဲ့ နေရာကတော့ ရွှေအစစ်တွေ ပိန်းနေအောင် ချထားတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီး။ ပန်ချာပီတွေက Sikh ဘာသာဝင်တွေပါ။
ဒီဒီဟာ ထက်မြက်တယ် အလုပ်လည်း အရမ်းလုပ်တယ် စကားပြောလည်း ပြတ်သားတယ်။ အစည်းအဝေးမှာ ငြင်းကြခုန်ကြရင် ဘယ်တော့မှ လေသံကျယ်ကျယ်နဲ့မငြင်းဘဲ တုိုးတိတ်ညင်သာ လေသံချိုလေးနဲ့ပြောတတ်တယ်။ ကိုယ်ကတော့ ဒီဒီ့ကို သိပ်အားကျတာပဲ။ ကိုယ်တို့၁၁ ထပ်ကလူတွေ တချို့ က4World Trade Center ကို ပြောင်းသွားတော့ ၁၀ ယောက်ပဲ ကျန်ခဲ့တော့ ရုံးမှာ တိတ်ဆိတ်ပြီး ကျန်ခဲ့နေတယ်။ ကို်ယ်က ဝေါထရိတ်စင်တာကို ပြောင်းတဲ့အထဲ ပါချင်တာ ရထားခ သက်သာသွား၊ ခုလို ၁ နာရီခွဲ ရထား ၄ ဆင့် ပြောင်းစီးစရာမလိုဘဲ ရထား ၂ ဆင့် ၁ နာရီလောက်ဆို ရောက်တာကိုး။ မကြီးက ဟဲ့ ဝေါထရိတ်စင်တာ မလုပ်ချင်နဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေက ဝေါထရိတ်စင်တာကိုပဲ ပစ်မှတ်ထားနေတာ ဝေါထရိတ်စင်တာမှာလုပ်ရင် ဘယ်နေ့ အကြမ်းဖက်သမားဝင်တုိုက်မလဲလို့စိတ်ပူနေရမှာ မလုပ်ရတာ ကံကောင်းတယ်လို့ မှတ်တဲ့။ ဖေဖေါ်ဝါရီလကုန်ပိုင်းလောက်က ဒီဒီအဖွဲ့ က လုံခြုံရေးမြှင့်တဲ့ ၁၇ ထပ်ကို ပြောင်းရပြီး Chief Estimator ရွန်မိုနာကိုအဖွဲ့ က ၁၄ ထပ်ကို ပြောင်းရတယ်။ ၉ ၁၁ တုန်းက တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ ဝေါထရိတ်စင်တာမှာ ပီအေရုံးချုပ်ရှိပါတယ်။ ၁၄ နှစ်ကြာပြီးတော့မှ ဝေါထရိတ်စင်တာကို ပြန်ပြောင်းနိုင်တယ်။ ပီအေမှာ လုပ်နေတာ အနှစ် ၃၀ လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ထိုင်ဝမ်သားဝမ်ချန်နဲ့၉ ၁၁ တုန်းက ဝေါထရိတ်စင်တာအကြောင်း မေးကြည့်တော့ လူတွေ တိုက်ပေါ်က ခုန်ချတာကို သူ့ မျက်စိနဲ့ ကိုယ်တိုင် မြင်ခဲ့ရတာတဲ့ ကမ္ဘာပျက်နေတဲ့အတိုင်းပဲ။ ဝေါထရိတ်စင်တာကို လေယာဉ်ဝင်တိုက်တော့ ပီအေရဲ့အင်ဂျင်နီယာဋ္ဌာနက အကြီးဆုံးအရာရှိချုပ်က အစည်အဝေးအတွက် အမြင့်ဆုံးအထပ်ကို ရောက်နေတာ ပြန်ဆင်းမလာခဲ့နိုင်ဘူး။ ၉၁၁ တုန်းက သေဆုံးသွားတဲ့လူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံကို ပီအေရုံးအထပ်တုိုင်းမှာ ချိတ်ဆွဲထားတယ်။ ခု ဝေါထရိတ်စင်တာ ပြန်ဖွင့်တော့ ပီအေက လေယာဉ်ဝင်တိုက်နိုင်တဲ့ အထပ်မြင့်တွေကို မယူထားဘူးတဲ့။ ခု ဝေါထရိတ်စင်တာက လုံခြုံရေး အဆင့်မြင့်ပါတယ်။ လေယာဉ်ဝင်တိုက်ခဲ့ရင် ပြိုမကျနိုင်အောင် ခံနိုင်ရည်အားကို အဆင့်မြင့်လို့၁၄ နှစ်ကြာအောင် အချိန်ယူ တည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ ဝေါထရိတ်စင်တာကနေ လစ်ဘာတီရုပ်တု၊ အောက်မက်ဟန်တန်၊ ဟက်ဆန်မြစ် ရှုခင်းတွေက အင်မတန် လှပါသတဲ့။ အစည်းအဝေးရှိလို့ဝေါထရိတ်စင်တာကိုများ ရောက်ခဲ့ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်ပါဦးတယ်။
ပြောင်းကြရွှေ့ ကြတော့ ကွန်ထရပ်တာတွေရဲ့confidential စာရွက်စာတမ်းတွေကိ သော့ခတ်ထားတဲ့ပုံးထဲ ပစ်ရတယ်။ သူများတွေ ပစ်ထားတဲ့ပန်းအိုး ၃ အိုးကို ကိုယ်က ပြန်ကောက်ပြီး ကိုယ့်ရုံးနေရာမှာ စိုက်ပျိုးထားတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်သူ လူစီတာပေးတဲ့ ပန်းအိုး (ပန်းအိုးဆိုပေမဲ့ အချိုရည်ပုလင်းကို ရေထည့်ပြီး အပင်ထည့်စိုက်ထားတာ) ကို ကွန်ပျူတာဘေးနားမှာ ထားတော့ ကိုယ့်ရုံးခန်းလေးက စိမ်းစိုနေတာကို သိပ်သဘောကျတာပဲ။ တပတ် ၂ ခါ ရေလောင်းလို့အပင်က အညွှန့် ၊ အရွက် အစိမ်းလေးတွေ ထွက်လာတာကို မြင်ရတာ သိပ်စိတ်ချမ်းသာတာပဲ။ ဒါကြောင့် လူကြီးတွေက တသက်ပျော်ချင် သစ်ပင်စိုက်လို့ ပြောတာ မှန်လိုက်တာ။ အံ့သြစရာပဲ ကိုယ်ဘဝမှာ တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးတဲ့ အရာတွေထဲမှာ ကိုယ့်ရုံးက စားပွဲခုံနေရာလေး ပါတယ်။ တနေတာရဲ့အချိန်တော်တော်များများ အဲဒီနေရာလေးမှာပဲ ကုန်ဆုံးပါတယ်။ အဲဒီနေရာကနေ ကိုယ့်အရည်အချင်း၊ ယုံကြည်မှုတွေ တိုးတက်လာခဲ့တယ်။ တခါတလေတော့ စိတ်ဖိစီးတာတွေ၊ ပင်ပန်းနွယ်နေတာတွေ ရှိပေမဲ့ အဲဒီနေရာလေးကြောင့်ပဲ ကိုယ့်ဘဝမှာ အဓိပ္ဗာယ်ရှိနေခဲ့တယ်။ အလုပ်လုပ်စရာမလိုတော့ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တနေကုန် ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ လျှော့ပင်သွားလို့ ကတော့ တပတ်လောက်ဆို ကိုယ်ငြီးငွေ့ လာလိမ့်မယ် ပျင်းစရာကောင်းလာလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တို့ ပြောင်းရတဲ့ ၁၇ ထပ်က security မြင့်တယ်။ အဲဒီအထပ်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ဆိုရင် SWAC ( Secure Worker Access Consortium ) လိုတယ်။ ဖောင်ဖြည့်တော့ ၁၀ နှစ်အတွင်း ဘယ်မှာနေခဲ့လဲ ဖြည့်ရတယ်၊ background check တွေလုပ်ပြီးတော့မှ ထုတ်ပေးတာပါ။ အဲဒါအတွက် ဒေါ်လာ ၅၀၀ လောက်ကုန်တယ်။ ကုမ္ဗဏီက အကုန်ခံပေးလို့ သာ တော်သေးတာပေါ့။ တပတ်တခါ ကိုယ်တို့ ငါးယောက် နေ့ လည်စာထမင်း ဝိုင်းဖွဲ့ စားကြရင် ဘော့စ်ကပါ လာဝိုင်းဖွဲ့ တယ်။
Go Green ! Surprising, one of my precious things in my life is my office place.
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်တုန်းက ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး ပစ်ထားလို့နောက်ဆုံး စင်္ကာပူဆေးရုံမှာ သေဆုံးသွားတဲ့ အိန္ဒိယဆေးကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်အကြောင်း ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရိုက်ပြထားတဲ့ documentary ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီ documentary ကို ကြည့်ပြီး အမျိုးသမီးတွေကို လူမဆန်စွာ ဆက်ဆံအတွက် ဂျာမဏီက အိန္ဒိယကျောင်းသားတွေ ဝင်ခွင့်ပိတ်လိုက်ပါပြီတဲ့။ ဒီဒီက အိန္ဒိယအစိုးရကို ရှက်လိုက်တာတဲ့ ၂ နှစ်ရှိပြီ အခုထိ အပြစ်မပေးသေးလို့ ။ ပြစ်ဒဏ်ပေးမှ နောက်ထပ်မလုပ်ရဲမှာ မဟုတ်လား။ အိန္ဒိယမှာ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး အင်မတန် နည်းပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ အိမ်ထောင်ပြုရင် ခေတ်ပညာတတ်စေဦးတော့ ယောကျာ်းဖြစ်သူအိမ်မှာ ကျွှန်လို အလုပ်အကျွှေး ပြုရတယ်။ မနက်မိုးမလင်းခင် အိပ်ယာထပြီး မိသားစုအတွက် မနက်စာ၊ နေ့ လည်စာ ပြင်ဆင်ရတယ်။ အလုပ်ကနေ ပြန်ရောက်ရင်လည်း တမိသားစုလုံးအတွက် ညနေစာ ချက်ပြုတ်ရတယ်။ ယောကျာ်းသေဆုံးသွားတဲ့အခါ သားယောက်ျားလေး မမွေးရင် အမွေဆက်ခံခွင့် မရှိဘူး။ အိန္ဒိယမှာ cast ဆိုတဲ့ ဇတ်နိမ့်ဇတ်မြင့် ခွဲခြားမှု ရှိပါတယ်။ ဇတ်နိမ့်အရိပ်ကျထားတဲ့ သောက်ရေကို မသောက်ဘဲ သွန်ပစ်တယ်။ ဆူနမ်တို့နီပေါမှာလည်း ခုထိ ဇတ်နိမ့်ဇတ်မြင့် ခွဲခြားမှုရှိတုန်း။ ဇတ်တူ၊ လူမျိုးတူတာကိုပဲ ယူရပါတယ်။ တကယ်လို့ များ ဇတ်မတူ၊ လူမျိုးမတူတာကို လက်ထပ်ခဲ့ရင် မိဘတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေ၊ ရပ်ရွာက အဆက်အသွယ် ခေါ်ပြောလုပ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ Don't tell me how to wear, Tell them not to rape ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ကိုင်ဆောင်ပြီး ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတာတွေ အတော်များပါတယ်။ အိမ်ရှင်အမေရိကန်မ အိန္ဒိယကို သွားလည်တော့ ရေချိုးတာကို ချောင်းကြည့်လို့ နဲ့အတော့်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ကြုံခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ အိန္ဒိယဟာ သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့safe မဖြစ်ဘူး။
မိဘမောင်ဘွားနဲ့ သွား၊ ညဖက်ဆို အပြင်မထွက်နဲ့ ၊ တက္ကစီအစား အများသုံးရထားစီးတဲ့။ ခုလက်ရှိ ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီက ထက်မြက်ပါတယ်။ သူပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်တုန်းက အဲဒီပြည်နယ်ကို စီးပွားရေးကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တော့ သူ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ အိန္ဒိယပြည်ကြီးကိုလည်း စီးပွားရေးတုိုးတက်အောင် လုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတာပဲတဲ့။ သူ့ လက်ထက်မှာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတာတွေကို ရက် ၄၀ အတွင်း တိုက်ဖျက်ပါတယ်တဲ့။ အရင်တုန်းကဆို စားပွဲတခုကနေ နောက်စားပွဲတခုကို ရောက်ဖို့ ဆိုရင် လာဘ်မပေးဘဲ မရောက်ဘူးတဲ့။ ယာဉ်မောင်းလို့လမ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်ရင်လည်း ရုံးကိုရောက်မှာ မပူရဘူး ယာဉ်ထိန်းရဲကို လာဘ်ပေးလိုက်ရုံပဲတဲ့။ နယူးဒေလီ ရဲတပ်ဖွဲ့ က နယူးဒေလီပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာ မဟုတ်ဘဲ အစိုးရရဲတပ်ဖွဲ့ အောက်မှာရှိတော့ လုပ်တာကိုင်တာတွေက ကြိုးနီစနစ်အတိုင်း နှေးတယ်တဲ့။ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘာမား အိန္ဒိယကို လာလည်တုန်းက ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီ ဝတ်ဆင်တဲ့ နက်ပြာရောင်ဝတ်စုံက ဒေါ်လာ ၁ သောင်းလောက် တန်တယ်တဲ့။ မိုဒီဆိုတဲ့ သူ့ နာမည်ကို အဲဒီဝတ်စုံမှာ ရေးထုိုးထားတာ မသိရင် အစင်းကြောင်းလို့ထင်ရတယ်။ အတိုက်အခံတွေက ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ သူ့ ကိုယ်သူ ဂုဏ်ဖော်လွန်းတယ် အပိုတွေလုပ်တယ်လို့ဝေဖန်တော့ ဝန်ကြီးချုပ်က အဲဒီဝတ်စုံကို လေလံတင်တယ်။ အဲဒီကရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ပြည်သူ့ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးတယ်။ မိုဒီဟာ ထက်မြက်ပါတယ် အိမ်ထောင်ကွဲ မိသားစုမရှိတော့ တိုင်းပြည်အတွက် အချိန်ပြည့် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ဟိန္ဒူဘာသာအစွန်းရောက် ဟိန္ဒူမှ ဟိန္ဒိူ အိန္ဒိယဆိုတာကလည်း ဘာသာပေါင်းစုံ။ သူ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တုန်းက ဟိန္ဒူ မွတ်စလင် အဓိကရုဏ်းမှာ သူက နောက်ကကွယ်နေ ကြိုးကိုင်တယ်လို့အတိုက်အခံတွေက ယူဆပေမဲ့ သက်သေမပြနိုင်ဘူးတဲ့။ တရုတ်ပြည်မှာလည်း တရုတ်သမ္မတအသစ်က လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတာတွေ တိုက်ဖျက်နေပါတယ်တဲ့။ အင်း ကိုယ်တို့ ရွှေပြည်ကြီးမှာလည်း ....
မတ် ၂၄၊ ၂၀၁၅။
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၃
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၆
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၇
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၈
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၉
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၁၀
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၁၁
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၁၂
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၁၃
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၁၄
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၁၅
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၁၆
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၁၇
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၁၈
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၁၉
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၂၀
ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၂၂
ဗီယပ်နပ်မလေး တွေအကြောင်းဖတ်ရတော့ ရုံးကဗီယပ်နမ်မလေးလဲ သေးသေးပိစိလေးပဲ တခါစားရင် ကိုယ်တွေ၂နပ်စာလောက်စားတာ
တခါမှလဲ ဝ မလာဘူး ငယ်ငယ်တုန်းကဆင်းရဲတယ် ဖိနပ်တောင်မစီးနိုင်ဘူးလို့ပြောဖူးတယ်
ဗဟုသုတတွေရသွားပြန်ပြီ။တချို့အကြောင်းအရာတွေက အသူအတွက်တော့ အသစ်အဆန်းတွေကြီးပဲ.အလုပ်စားပွဲကအပင်လေးတွေချစ်လိုက်တာ..အသူလဲအဲ့လိုတော့စိုက်ချင်တယ်။နေရာကကွန်ပျုတာခုံတနေ၊ရာစာတောင် မနည်းတောင်းထိုင်နေရသလိုဖြစ်နေတာ.. :)
မျိုးရိုးထဲမှာ ဆိုးပေကြီးများ - ၅
Bear Mountain သွား တောလား
Cold Spring သွား တောလား
အလုပ်ရှာခြင်း အနုပညာ - ၎